WBO fi Hooggana ABO Adda Baasanii WBOtti Duulanii Balleessuu Dadhabanii WBOn Humna Jalaa Fixnaan Cubbuu Daawud irra Kaayu! - Kichuu
[ September 19, 2020 ] Prosecutors Charge 24 Individuals Including Jawar Mohammed With Terrorism	Africa
[ September 19, 2020 ] Hold Your Fire: Ethiopia’s Political Crisis	Radio
[ September 19, 2020 ] Ethiopia files terrorism charges against leading opposition activist	Africa
[ September 19, 2020 ] Ethiopia charges prominent opposition figure with terrorism	World
[ September 19, 2020 ] Irreechaa 2020 loading . Enjoy the beautiful view of Oromia and ..	Africa
[ September 19, 2020 ] Ethiopia and Russia have signed an agreement to build a nuclear power plant in Ethiopia	Africa
[ September 18, 2020 ] Kolombiyaatti kanneen hiriira bahan siidaa nama impaayera Ispeen tajaajile jigsan	News
[ September 18, 2020 ] OMN: Turtii obbo Dawud Ibsaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo Waliin. (Ful 18, 2020)	TV
[ September 18, 2020 ] Breaking: Icciitii OPDO PP keessaa qabatamaa bahe.	News
[ September 18, 2020 ] Itoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa	News
HomeAfaan OromooNewsWBO fi Hooggana ABO Adda Baasanii WBOtti Duulanii Balleessuu Dadhabanii WBOn Humna Jalaa Fixnaan Cubbuu Daawud irra Kaayu!
WBO fi Hooggana ABO Adda Baasanii WBOtti Duulanii Balleessuu Dadhabanii WBOn Humna Jalaa Fixnaan Cubbuu Daawud irra Kaayu!
Mootummaan Diqaalaota Amhaaraa akka waliigaltee Asmaraatti WBO qeebaluu didee lola filatee duula WBOtti dafee marraa meeqa bobbaase. Osooma kana godhanii Jawar fi Baqqalaa Garbaa maqaa araaraan WBO keessaa gansiisanii WBO laaffisanii sosso’anii miseensota WBO 700 ol gansiisani battaluma WBOtti duulanii balleessuuf duulani. WBOn ajajoota isaa Hoogganoota ABO ta’anii Dirree Jiran waliin cichee lola itti fufee humna RIB Kan Dhiha turee fi Kaaba ture kan gadi itti guurame hunda fixe. Gidduu kana ammoo humna haaraa leenjisanii fi humna Miliishaa Killilii Amhaaraa WBOtti bobbaasanii humnichi jalaa dhume.
Kanaaf Alamuu Simee amma boo’aa jira. Amma sababa ittiin Jaal Daawud maqaa balleessanii rukutanii (hidhanii) sochii nagaa ABO hojii ala godhan Amhaarti falaa jiraachuutu calaqqisa. Ofii karaa dabaa fi cubbuu filatanii WBO baaqelaa isaan qoroxxomuuf amuummatan isaan qoroxxome! Wanjala ABO fi WBO garaagar baasuu jaraa iyyuu nami isaan gaafate hin jiru. WBO qofatu adabee Gumaa baasaa jira.
Ammoo amma Jaal Daawud target godhatanis ofumaa kasaaruuf deemu. Daawud hidhuun ykn miidhuuf yaaluun kufaatii isaanii dachaan ariifachiisa.
Ani OSOOn DAAWUD TA’EE:
Polotikaa dharaa Amhaaraa fi diqaalotni mataa itti ta’anitti deebi’ee hin galu. Aluma tureen hooggana ABO kan magaalaa jiruu fi Dirree Qabsoo jiru Tokkoomsa. ABO (miseensota hin hidhannee fi WBO) tokkeesseen hoogganuu itti fufa. Keessattuu haala mootummaan Amhaaraa kuni filannoo HATUUF leenjiii adda addaa kennaa jiruu fi software ittiin hatan qacaree hojjeta jiru keessatti Ethiopiatti deebi’ee ofumaa dorgomee isaan sagalee koo hatanii nan injifadhe jedhanitti hin galu. Waa lama (WBO fi Filannoo) wal faana dhabuun Jaal Daawud kasaaraa dachaa dha. Daawud alatti hafneen lukkeeleen hooggana ABO magaalaa Finfinnee keessaa diinaa waliin hojjetaa Jaal Daawudiin mashaqqaa keessu hundis kasaartee hafti.
DUBBIIN AKKANA TAATE KUNOO!!
ODPn keeysan halkanuma tokkoon jiksitee bultekaa
Dr MRARARAAn Dubbateera kaaleessum jarrikun garas deemanii yoo liqimfamuufii dide deebisaniiti haqqisu jedheeture” ammas isumatu ta aatijira.
Dooktar Alamuun kaleessa paartin isaanii yaada araaraa abbootiin Gadaa Oromoo dhiyeessaniin waliigaluu ibsaniit turan.
Har’a ibsa laataniin garuu abbootiin Gadaa dhimmicharratti akka mari’annuu fi walmorminu carraa nuuf hin laanne jedhaniiru.
Hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaan kaleessa dhimma WBO abbootiin Gadaa fi ummata Oromoof dhiisnerra, isiniif kennine jechuun isaanii ni yaadatama.
Dooktar Alamuun dubbiin obbo Daawud fedhii dhimmicha hiikuu dhabuu muul’isa jedhaniiru.
Dooktar Alamuun ibsa har’a Shaggariif laataniin abbootiin Gadaa jaarsa ta’anii araarsuu malee hidhannoo hiikkachiisanii waraana kaampii galchuu hin danda’an jedhaniiru.
Abbootiin Gadaa waraana hiikkachiisanii mooraa galchuun walabummaa isaanii shakkii keessa galchas jedhaniiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa eegsisuuf namoota hidhe seeratti dhiyeessuun akka itti gaafataman godha; kan biroos yoo shakke ni to’ata jedhan ibsa isaanitiin.
Waldhabbii ABO fi mootummaa hiikuuf waltajjii kaleessa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti gaggeessummaa Gumii Abbootii Gadaatin qophaa’erratti koreen dubbii fixxuu miseensota 71 qabu hundaa’un ni yaadatama.
Oromo standarditu gabaase
OMN:Weerara Dachee Oromiyaa , Bordoddee (Amajji 24, 2020)
WABOn kaayyoof malee garaaf hiinlolu dhugaaf sabasaatiif dhaabata.Dhigaaf lafeen gotoowwanii haqa Oroomof jecha wareegame.Lafa gurguree maalaqa kufachuufii miti.
Dhira garaa kutatee bishaan raafuutu gabbiisa.WABO garaashe kutattee baalaa nyaachaa,dhaga boraafachaakaayyoosheetiifi haqa Oroomotiif loltii.Wagaa 27 kan hiinsiirreesiine wagaa lama keesattii wanta addaa hiinegnu.Yeroo filanoon gahu akka saree maraatu asiif achi figdanii nama misoomaaf yadee fakkaachuun amalakeesanii.Waaheen birmaduummaafii Dimikiiraasi siniif hingallee siqaa karaarraa.Hama isiin jirtaniitti,biyyiittiinsuun nagaa hiin argatu.Amas jalamureen siiniif hima,karaa haqaafii haqaa duwwaan ABOn hama hiin hirmaanneetti biyyasanaaf furmanii hinjiru.ABO,dhigaafii lafee Oroomotiin walmakameera.Sagal yabeef sagal hindhalchu.sagal maqaa jijjiirataniif wanttii jijjiiramu hinjiiru.Nagasuumaan of sobdu.Jedhaa,ta`atii tisiisakeesan lakkaawadha.
Caalaa Habtaamuu Gantuun Kumaatama New Oromo Music 2020.